Musharax Daahir Cawaale oo gaarsiiyay deeq dawo ah isbitaalka haweenka Jowhar (Sawiro) · Jowhar.com Somali News Leader
Musharax Daahir Cawaale oo gaarsiiyay deeq dawo ah isbitaalka haweenka Jowhar (Sawiro)
by mahad | Wednesday, Sep 13, 2017 | 1658 views
September 13 (Jowhar)—Musharax Daahir Cabdulle Cawaale oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada Maamul goboleedka Hirshabelle ayaa maanta gaarsiiyay deeq dawo ah isbitaalka haweenka ee magaalada Jowhar.
Dr Daahir Cabdulle Cawaale ayaa mid mid u booqday qolalka ay jiifaan bukaanada ku jira isbitaalka haweenka ee magaalada Jowhar taasoo ay gacanta ku hayso hay’ada IMC. Musharaxa ayaa warbixino ka dhagaystey maamulka isbitaalka oo ah mid haweenka ay ku umulaan isla markaana cudurada haweenka lagu daweeyo.
“Waxaan u mahadcelinayaa dhakhaatiirta isbitaalka iyo shaqaalaha waxaan Alle uga baryayaa in uu caafimaad siiyo bukaanada ku jira,balse waxaan halkan ka ballanqaadayaa haddii aan ku guuleysto doorashada madaxtinimada inaan wax weyn ka qaban doono adeega caafimaad ee ay bulshada Hirshabelle u baahan tahay.”ayuu yiri Musharax Daahir Cabdulle Cawaale.
Maamulka isbitaalka haweenka ee magaalada Jowhar ayaa u mahadceliyay musharax Daahir Cabdulle Cawaale, iyagoo sheegay in ay ku faraxsan yihiin in muwaadin ka soo jeeda Hirshabeelle ahna musharax uu jeebkiisa uga soo iibiyay dawo bukaanada ku jira isbitaalka.
Sidoo kale Musharax Daahir Cabdulle Cawaale ayaa booqday beero ku yaal duleedka Waqooyi Bari ee magaalada Jowhar isagoo kula kulmay beeralayda.
“Dhulkeenu waa dhul sidan u barwaaqo ah dadkeenuna cuntada dibada ayay ku tiirsan yihiin,waxaan ka shaqeyn doonaa sidii ay bulshada Hirshabelle ay gaarto isku filnaansho dhinaca waxsoosaarka ah anigoo dhisi doona warshado yaryar oo beeralayda waxsoo saarkooda ku habeystaan.”ayuu yiri Musharax Daahir Cabdulle Cawaale.
Intii uu booqashada ku marayay musharax Daahir Cabdulle cawaale qeybo ka mid ah magaalada Jowhar ayaa waxaa hoolka shirarka magaalada Jowhar ka socday qudbado ay ku soo bandhigayaan waxqabadkooda qaar kamid ah musharaxiinta madaxweynaha Hirshabelle.
Musharaxiinta kala ah Cabdi faarax laqanyo,Maxamed cabdi waare iyo Eng Cabdikariin Cali Nuur ayaa qudbado ka hor jeediyay xildhibaanada baarlamaanka iyo qaar ka mid ah bulshada dowlad goboleedka Hirshabelle.
Dibad baxayaal rabay inay ku hor banaan baxaan Xarunta Golaha shacabka oo rasaas lagu kala eryay
Madaxweyne kuxigeenka Puntland oo xilka ka qaaday Wasiir taageeray dhiibistii Qalbi Dhagax